အဆိုပါ Minelab ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သော်ကြှနျုပျတို့သညျဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြန်မာဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ငါတို့အခွင့်အာဏာမြန်မာကုန်သည်တွေမှအမြန်လင့်များပေးထားပြီ, မြန်မာဘာသာစကားတွင်လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်မဟုတ်။
The Minelab website is currently not available in Burmese language, however we have provided Burmese downloadable documents on this webpage and quick links to our authorised Myanmar dealers.
ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲ & လမ်းညွှန်များ
ရွှေအ detectors အ
GOLD MONSTER 1000 Getting Started Guide MY, ID, JP, KR - 2.28 MB
EQUINOX 600 800 Getting Started Guide MY Burmese - 1.22 MB
Catalogue & ဘရိုရှာ
2018 Gold Detectors Overview Brochure EN MY - 1.72 MB
ဘဏ္ဍာကို detectors အ
2018 Treasure Products Overview Brochure EN MY - 2.12 MB
EQUINOX Series Brochure A4 4p MY - 1.99 MB
EQUINOX Series Brochure A4 4p EN - 2.21 MB
Authorised Partner ကျဘျဆိုကျ
ကျနော်တို့လက်ရှိသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကုန်သည်တွေရှာကြ၏။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားကြလျှင်, ဤ link ကိုပုံစံထုတ်ဖြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး: http://www.minelab.com/anz/contact-us-3/become-a-dealer
တစ်ဦးက Minelab ကိုယ်စားလှယ်မကြာမီသင်တို့နှင့်အတူအဆက်အသွယ်ရကြလိမ့်မည်။
We are currently looking for dealers in your country. If you are interested, please fill out the form on this link: http://www.minelab.com/anz/contact-us-3/become-a-dealer
Tin Htay International Exploration and Mining Services
အမွတ္၁၉ ခုနွစ္လြွာ, Windsor Estate တိုက္, ရွင္ေစာပုလမ္း , Sakura ေဆးရံုးေဘး , စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္ , ရန္ကုန္တိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံ
Tel : ၀၁ ၅၁၂၁၃၈
7th Floor Windsor Estate
19 Shin Saw Pu Road
Zaw Linn & Zay Ya, Geologist
Mob. +95 9795823460 +95 9962375221
P +95 1 512138